लोकतन्त्र भोकतन्त्र नबनोस
हाम्रा पुस्ताले भोगिरहेको यो जटिल परिस्थितिलाई हाम्रै सुझ्बुझले निराकरण गर्नुपर्छ यो शाश्वत हो तर अहिले देशको परिस्थिति कता डोहोरिरहेको छ, सर्बसाधारण जनमानसले बुझ्न नसकेको अवस्था छ । के यो अवस्थाले निकास पाउदैन त ? अन्योलको वातावरणमामा कहिलेसम्म रुमलिरहनु पर्ने हो ? जनताको समृद्धि सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण भनेको हिजोको भन्दा जनताको जीवनस्तर कमजोर हुँदै जानु त पक्कै पनि होइन होला । अहिलेको अवस्था भनेको देश र जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर प्रतिकुल विकट परिस्थितिलाई क्रमश अनुकुल बनाउँदै सरकारले लैजानु पर्छ । सरकार आफै कुहिराको काग बनेर बस्नु हुँदैन ।
यो विकट र भयावह परिस्थितिसँग सामना गर्ने दायित्व राज्यको हो । सरकारले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना निर्बाध गर्नैपर्छ, गरेको पनि छ । तर गरेको प्रयास पर्याप्त भएको अनुभूति कसैले पनि गर्न सकेको छैन ।
यसै बिचमा उदाहरणीय केही काम पनि भएका छन् तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूती गर्न पाए कि पाएनन्, यो गम्भीर प्रश्न छ । अहिले देशले संकट ब्यहोरिरहेको छ भने अर्कोतिर बिपन्न असहाय बर्ग कसैले केही दिन्छ कि भनी सडक पेटीमा बसेर भोकको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हिजो देश र जनताको समृद्धि अनि ती मजदुर किसान न्यून आय आर्जन भएका बिपन्न बर्गकाका लागि सामाजिक आर्थिक स्तरलाई सुधार गर्ने भनेर गरिएको राजनैतिक परिवर्तनले सार्थकता पाउने कि नपाउने ?
बुझ्नुपर्ने सवाल के पनि छ भने भोक बारुद, बम पनि हो । भोकोपेटले सिद्धान्त वा सरकार देख्दैन, देख्न खाना हो । भोक र शोकमा परेकाले अवस्य पनि निकास पाउनैपर्छ नत्र त्याग र बलिदान दिनेको आत्माले सराप्ने छ । अहिले ती बिपन्न बर्गका लागि सृजना भएको बिकराल परिस्थितिमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेतृत्व गरेको सरकारले आर्थिक सामाजिक बिकासका नयाँ ढाँचामा तत्कालका लागि र दूरगामी सोचका अभियान चलाउन पर्छ कि पर्दैन ? यदि पर्छ भने फास्ट ट्याकमा जनताले अनुभुति गर्ने गरि बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, कालाबजारी भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्न गतिशील पाइला चाल्नुपर्ने भएको छ । राम्रो काम गर्दागर्दै पनि ब्यबधान आउँछन् भने दायाँबायाँ नहेरी अगाडि बढ्नैपर्छ, इमानदारीतायुक्त काँधमा झोला भिरेर लाग्नैपर्छ ।
सरकारमा अहिले देखिएको बिबादास्पद माहोल छ । यस्ले छिटो भन्दा छिटो निकास पाउनुपर्छ । हाम्रालाई पक्षपोषण गरेर राम्रालाई बाहि¥याउनुले न त जनताको हित हुन्छ नत सरकारलाई गति दिन सकिन्छ । जस्ले देश र जनताको लागि लोकप्रिय काम गर्न सक्छ जस्तो देखिन्छ, उसैलाई सरकारमा ल्याउनु पर्ने आबश्यकता छ । त्यसमा चुनौती पनि अवस्य होला चुनौतीको सामना गरेर निकास खोल्न अति आवस्यक देखिन्छ । उसको मान्छे र मेरो मान्छे भनेर विवाद लम्याइरहने हो भने देशले निकास कहिले पाउने ? जो कोरोना, बाढीपहिरोबाट थिचिएका छन्, तिनले कहिले राहत पाउने ? अहिले सरकारलाई प्रभावकारी पार्नका लागी मन्त्री परिषद्का सदस्य फेरबदल गर्ने केही मुख्य मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने भन्ने सुनिएको छ । नेतृत्वमा जो आओस् लोकप्रिय ब्याक्तित्व आओस् देश र जनताको हितमा काम गर्ने नेतृत्व आओस् । भ्रष्टाचार, अनैतिक, अराजकताको जरो उखेल्ने लोकप्रिय काम गर्ने आओस् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको अहिलेको जोखिम र जनताको बिजोगलाई हटाउन इमानका साथ लाग्ने नेता आउन् । यही लोकको चाहना हो । लोकचाहना र लोकआवाजलाई नसुन्ने हो भने यसलाई प्रत्युत्पन्न मति भन्न सकिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । सबैले समयमै बुझौं ।